crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Duqa Muqdisho: “Afafka ku qoran boorarka ku badala afkeenna” | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka January 17, 2016	0 329 Views
Muqdisho (Himilonews) – Isaga oo kahor hadlayey kumaankun dadweyne reer Muqdisho ah, guddoomiyaha gobolka Banadir ahna duqa caasimadda, Yuusuf Abdi Hussein, wuxuu wax laqaayibo ku sheegay boorarka ku dhigan af-Ingiriiska ee suran waddooyinka magaalada kuwaas oo shaki ah inay joogaan Ingiriiska ku abuuray bulshada caasimadda–isaga oo faray milkiilayaasha goobahaas ganacsi inay boorarkaas wax ka badalaan.
Kahadalka fagaaraha Daljirka Dahsoon, Yuusuf wuxuu ku nuuxnuuxsaday sida liidan ee lagu gacan hoosiisay afkeenna hooyo–isaga oo ka codsaday bahda ganacsatada inay tallaabadaas wax ku oolka ah la fahmaan gobolka.
Marka loo eego waaxda bileyska, milkiilayaasha goobaha ganacsi ee leh boorarka Ingiriiska waxaa laga filayaa inay dajiyaan ama ay af Soomaali u rogaan qoraallada ku dhigan haddii kale tallaabo sharci lala tiigsan doono.
Isaga oo sii hadlaya, mudane Yuusuf wuxuu tilmaamay in afku yahay heybta aan kaga soocannahay bulshooyinka kale–loona guntado in la dhiirri-geliyo horumarintiisa.
Isu-soo baxa oo lagu qabtay Daljirka Dahsoon, waxaa kale oo goob joog ka ahaa ra’isul wasaare ku xigeenka dalka Maxamed Carte iyo wasiirka waxbarashada marwo Khadija Bashiir Ali.
Tallaabadan uu maamulku ka dhawaajiyay waxay kusoo aadeysa xilli ay foodda nagu soo heyso maalinta afkeenna oo ku beegan 21-bisha Janaayo.
Hayeeshe, markii ugu horreysay kadib 20-sano oo afku la dacdareysnaa ummadiisa, tani waa ifafaalo cusub oo usoo baxay samata-bixiisa. Balse inta aanay jirin jiil afkooda ilbaxnimo ku doona, sida Senegal ama Singapore, Soomaaliya waxay midnimeeda ku saleyn doontaa ku hadalka afafkii gumeystay.
Previous: Siduu Islaamku ugu faafay Shiinaha?!
Next: Carruurta Yurub oo laga mamnuucayo adeegsiga wejibuug ‘facebook’